Iichiza zeenyoni ezinomsindo - ii-Geofumadas
Iichiza zeenyoni ezivuthayo
Agasti, 2011 Internet kunye neBlogs, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ixesha abantu abasetyenzisileyo ekunxibelelweni, lenze imidlalo ejoliswe kwiziphequluli okanye iifowuni ziba yoshishino elinenzuzo.
Iinqwelo ezinomsindo ngenye yezo zinto, ekuqaleni zibonakala zingumdlalo onobuqhophololo. Kodwa xa abadlali bedlula isigaba sokuqala kuba lukhuni, kuba ngaphezu kokunika ukutya iinkukhu okanye ukuvuna izaqathe, kubonisa ukuba kunamanqanaba athile anomdla.
Eyilwe yinkampani yaseRovio, isekelwe kumgaqo-nkqubo wokuqalisa, ukusuka kulo ndiyakhumbula umdlalo omdala we-DOS owawuquka ukunciphisa i-gorilla eshiywe kwizakhiwo, ngebhanana, enezela i-angle yokuqalisa kunye nesivinini sokuqala. Ukulula kwayo kwakubonakala kungenangqondo, kodwa kwaba yinto enonwabo xa kunikwa uluhlu olukhawulelweyo lwemidlalo olutholakalayo kunye nexesha elidityanisiweyo kwenkampani yokwakha.
Oku, nangona kusekelwe kulo mgaqo, unomgangatho ophezulu wokuyila kwe-HD, ukunambitha okubonakalayo kunye nokuthengisa okukhono. I-Chrome ibe yinye inqununu edibanise ngokukhawuleza isiphequluli ukuba isebenze ngaphandle, nangona yaba yinto eyaziwayo kuqala kwiiprogram ze-TV kunye nezethelevishini ezizikhankanyayo.
Kulo mxholo kunye nabaphulaphuli, kukho i-Angrybirders.com, iwebhusayithi ezinikezele kuphela ukugcina abaxhasi bezinkukhu bayaziswa. Ibhulogi lijolise ekuchazeni, ngokusebenzisa iividiyo zokubonisa, indlela yokudlulela ngalinye iqanaba, okokuqala kubonakala kulula kodwa kodwa njengoko udibeneyo kunye neentaka ezinqabileyo ezinokuthi zithintela kakuhle.
Eyona intle, amakhonkco kwiqela lenjongo ekunene, bavulelele ukuba udidi khetha izinga sinomdla ngakumbi emazantsi eli yolawulo kukho kukho tutorials ukuba bapase kwinqanaba ngalinye ngempumelelo ukufikelela iinkwenkwezi ezintathu.
Ngokwendlela yoyilo, kufuneka sivume ukuba isayithi ihlelwe kakuhle. Ukunyuka kwi-WordPress ine template ene-css esebenze kakuhle, kuba nangona usebenzisa amafonti angavumelekanga isebenza ngokukhawuleza.
Ngokubambisana noluntu, ii-Angrybirders zivumela abasebenzisi ukuba balandele ukuhlaziywa nge-Facebook, Twitter, rss kunye nokubhaliselwa nge-imeyile nge-Feedburner.
Ngoko, kubasebenzisi abanomdla kwi-Angry Birds Online, iingcebiso, iikhowudi okanye iikhowudi zeentaka ezinomsindo, ndiqinisekile ukuba le ndawo iyona ndawo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Umtshini weGeo eBrazil
Post Next iipilisi GIS GeographicaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-12 "Ukuphanga iinyoni ezinomsindo"
wakho umama uthi:
Fuck u fucking
njenge-ayare i-pinche ayfon ephakathi kwe-asteroids
umama o uthi:
Ayinakudla iirhafu ze-5.
I-NESECITO I-CODE YOKUSEBENZISA IMITHETHO YOKUBHALA
Samael Amaral Bravo uthi:
Heee ungandithumelela ikhowudi, ndifuna ukubulala ezohagu
i zam ibhola
Isicwangciso esilungileyo semidlalo yeentlobo ze-Angry Birds ARRIBA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...
yu chingaling ayiluncedo ukucinga ukuba ndiyidla kuphela i-blowjobs